Wariye Caan ah iyo Ganacsade oo labaduba Galabta Lagu toogtay magaalada…………. | Xaqiiqonews
Wariye Caan ah iyo Ganacsade oo labaduba Galabta Lagu toogtay magaalada………….
Aas-aasihii ahna madaxii Tv-ga luuqada Persiga ku hadla ee Gem TV ayaa lagu toogtay magaaladda Istanbul ee dalka Turkey.
Saeed Karimian, oo ahaa 45 sano jir ayaa ayaa la toogtay xili ay isla joogeen ninka kasoo jeeda Kuweyd oo ay ganacsiga wadaagaan kaas oo isna geeriyooday.
Wararka ay boolisku sheegeen ayaa ah in weerarka lagu dilay wariyayhan loo adeegsaday gaari, kaas oo markii dambe la helay isagoo la gubay.
Mr Karimian ayaa kasoo cararay dalkiisa Iiraan halkaas oo ay maxkamad ku xakuntay lix sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay in warbaahintiisa ay tabisay warar been abuur ah.
“Kooxda dilka geysatay ayaa wajiga soo duubtay, waxaana ay rasaas ku fureen halkii ay ku sugnaayeen” sidaas waxaa laga soo xigtay saraakiisha amaanka.
Qoyska uu kasoo jeedo wariyaha la dilay ayaa BBC usheegay in Mr Karimian uu wajahayay hanjabaadyo dil ah, qorshihiisana uu ahaa inuu si deg deg ah uga baxo Istanbul isla markaana uu aado London, waase la dilay.
Si kastaba, waxaa jira warar sheegaya in dilkaas lala xariirinaayo arimo ganacsi ama mid ay ka dambeeyaan kooxo calooshooda ushaqeysanaya.
Tv-ga ayaa xaruntiisa weyn ay ku taalaa magaaladda London, laakiin waxaa si weyn looga tabiyaa Dubai, waxaana Tv-gan oo ka koopban 17 kanaal qaarkood ay ku hadlaan Luuqadaha Kurdiga, Azeri iyo Carabig.